Mgbe Iwe Na-ewe Anyị n’Ihi na Anyị ‘Nwere Ihe Mere Anyị Ga-eji Mee Mkpesa’ (Ndị Kọlọsi 3:13)
NKEBI NKE 1 ‘M Ga-achọ Atụrụ M Furu Efu’
NKEBI NKE 2 Nchegbu—Nsogbu “Na-akpagide Anyị n’Ụzọ Niile”
NKEBI NKE 3 Mgbe Iwe Na-ewe Anyị n’Ihi na Anyị ‘Nwere Ihe Mere Anyị Ga-eji Mee Mkpesa’
NKEBI NKE 4 Obi Amamikpe “Sachapụ M Mmehie M”
NKEBI NKE 5 Lọghachikwute ‘Onye Ọzụzụ Atụrụ na Onye Nlekọta nke Mkpụrụ Obi Gị’
GỤỌ NKE Abua Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Basque Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Bislama Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Cuban Sign Language Czech Damara Dangme Danish Douala Drehu Dutch Edo Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Finnish Sign Language French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Gokana Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Indonesian Sign Language Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Krio Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lenje Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lunda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mexican Sign Language Mixe Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Niuean Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Peruvian Sign Language Pidgin (Cameroon) Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Russian Sign Language Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zimbabwe Sign Language Zulu
Otu nwanna nwaanyị aha ya bụ Linda kwuru, sị: “Otu nwanna nwaanyị nọ́ n’ọgbakọ anyị boro m ebubo na m zuuru ego ya. Ndị ọzọ nọ́ n’ọgbakọ anyị nụrụ ya, ụfọdụ dụnyekwaara ya ukwu. Mgbe e mechara, nwanna nwaanyị a bịara gwa m na ya amatala na ọ bụghị mụnwa zuuru ego ya. Ọ bụ eziokwu na ọ rịọrọ m mgbaghara, ma n’obi m, echeghị m na m ga-agbagharali ya n’ihi otú o si mechuo m ihu.”
ỤDỊ ihe a mere Linda ò metụla gị? Ihe ahụ e mere ya were ya ezigbo iwe. Ọ dị mwute na o nweela ụfọdụ ndị ụmụnna ha kpasuru iwe, ha ejiri maka ya lawa azụ n’ofufe Jehova. Ọ̀ bụ otú ahụ ka ọ dị gịnwa?
Ò Nwere Onye Ga-enweli Ike “Ikewapụ Anyị n’Ịhụnanya Chineke”?
Nke bụ́ eziokwu bụ na o nwere ike isiri anyị ike ịgbaghara nwanna anyị mejọrọ anyị. A sịdị kwuwe, Ndị Kraịst niile kwesịrị ịhụ ibe ha n’anya. (Jọn 13:34, 35) Ọ na-akacha ewute anyị ma ọ bụrụ nwanna anyị mejọrọ anyị.—Abụ Ọma 55:12.
Baịbụl kwuru na e nwere mgbe nwanna nwere ike ime nwanna ibe ya ihe ọ “ga-eji mee mkpesa.” (Ndị Kọlọsi 3:13) E mee anyị ụdị ihe ahụ, ọ naghị adị mfe ịma ihe anyị kwesịrị ime. Ma, olee ihe nwere ike inyere anyị aka? Ka anyị leba anya n’ihe atọ Baịbụl kwuru ga-enyere anyị aka:
Nna anyị nke eluigwe maara ihe niile. Jehova na-ahụ ihe niile na-emenụ. Ọ na-ahụ mmegbu ọ bụla a na-emegbu anyị, na-ahụkwa nsogbu mmegbu ndị ahụ na-akpatara anyị. (Ndị Hibru 4:13) Ahụhụ anyị na-ata na-ewute ya. (Aịzaya 63:9) Jehova anaghị ekwe ka ‘nsogbu ma ọ bụ mkpagbu’ ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ, ma ọ bụdị ohu ya ọzọ, ‘kewapụ anyị n’ịhụnanya ya.’ (Ndị Rom 8:35, 38, 39) Anyịnwa ekwesịghịkwa ikwe ka ihe ọ bụla ma ọ bụ onye ọ bụla kewapụ anyị n’ebe Jehova nọ.
Ịgbaghara mmejọ abụghị ịkwado ihe ọjọọ. Ọ bụrụ na anyị agbaghara ndị mejọrọ anyị, ọ pụtaghị na anyị na-akwado ihe ọjọọ ahụ ha mere anyị ma ọ bụkwanụ na anyị na-ekwu na ihe ahụ ha mere adịchaghị njọ. Jehova anaghị akwado mmehie. Ma, cheta na ọ hụ ihe mere ọ ga-eji gbaghara onye mere mmehie, ọ na-agbaghara onye ahụ. (Abụ Ọma 103:12, 13; Habakọk 1:13) Mgbe Jehova na-agwa anyị ka anyị na-agbaghara ndị ọzọ, ọ pụtara na ọ na-agwa anyị ka anyị na-eṅomi ya. Jehova anaghị “anọgide na-ewe iwe ruo mgbe ebighị ebi.”—Abụ Ọma 103:9; Matiu 6:14.
Anyị kwụsị iburu ndị ọzọ iwe n’obi, ọ ga-abara anyị uru. Olee otú ọ ga-esi baara anyị uru? Chebaragodị ihe atụ a echiche. Were ya na iji obere okwute n’aka ma gbatịa aka gị. Ebe ọ bụ na okwute ahụ adịchaghị arụ, ọ ga-adịrị gị mfe ijide ya ruo obere oge. Ma, ọ bụrụkwanụ na a sị gị jide ya ruo ogologo oge? Olee mgbe ị ga-ejiru ya ike agwụ gị? Ọ̀ bụ nkeji ole na ole, otu awa, ka ọ̀ bụ karịa? Nke bụ́ eziokwu bụ na aka ga-eji gị. Ma, ọ pụtaghị na okwute ahụ ebukwuola ibu. Kama, ka ị na-ejidekwu ya, ka ọ na-anyịkwu gị arụ n’aka. Otú ahụ ka ọ dịkwa ibu ihe mmadụ mere anyị n’obi. Ka anyị na-ebu ya n’obi, ka ọ na-anyịkwu anyị arụ, ọ sọgodị ya ya bụrụ na ihe ahụ e mere anyị bụ obere ihe. Ọ bụ ya mere Jehova ji na-agba anyị ume ka anyị ghara ịna-ebu iwe n’obi. N’eziokwu, anyị kwụsị iburu mmadụ iwe n’obi, ọ ga-abara anyị uru.—Ilu 11:17.
Anyị kwụsị iburu ndị ọzọ iwe n’obi, ọ ga-abara anyị uru
“Ọ Dị M Nnọọ Ka Ọ̀ Bụ Jehova Ji Ọnụ Ya Na-Agwa M Ihe Ndị Ahụ”
Gịnị nyeere Linda anyị kwuru okwu ya ná mmalite aka ịkwụsị iburu nwanna ahụ mejọrọ ya iwe n’obi? Otu n’ime ihe ndị nyeere ya aka bụ na o chere echiche gbasara ihe ndị Akwụkwọ Nsọ kwuru mere anyị kwesịrị iji na-agbaghara ndị ọzọ. (Abụ Ọma 130:3, 4) Otu nke kacha ruo ya n’obi bụ nke kwuru ihe gosiri na ọ bụrụ na anyị agbaghara ndị ọzọ, Jehova ga-agbagharakwa anyị. (Ndị Efesọs 4:32–5:2) Ihe ndị ahụ ọ gụrụ ruru ya n’obi. Ọ sịrị: “Ọ dị m nnọọ ka ọ̀ bụ Jehova ji ọnụ ya na-agwa m ihe ndị ahụ.”
Linda mechara kwụsị iburu nwanna nwaanyị ahụ iwe n’obi. O ji obi ya niile gbaghara ya, ha abụrụkwala ezigbo enyi ugbu a. Linda amalitekwala jiri obi ụtọ na-ejere Jehova ozi. Ka obi sie gị ike na Jehova chọkwara inyere gị aka ime ụdị ihe a Linda mere.
Otu nwanna nwaanyị aha ya bụ Marie kwuru, sị: “Mgbe m hapụrụ ọgbakọ, obi nọ na-ajọ m njọ. M nọkwa na-ewere ụmụnna ụfọdụ iwe. Ma mgbe m gụrụ akwụkwọ Bịaruo Jehova Nso, o mere ka m cheta otú Jehova hụruru m n’anya. Ka m nọ na-agụ ya, m bịara hụwakwa Jehova n’anya.” Isi nke 26 na nke 30 n’akwụkwọ ahụ kwuru ihe mere Jehova ji agbaghara anyị mmehie, otú o si agbaghara anyị mmehie, nakwa otú anyị nwere ike isi ṅomie ya.
Ekwela Ka Ihe Ọ bụla Mee Ka Ị Ghara Ịnọ Jehova Nso